डा. लोहनी भन्छन्– बुद्ध भूमिमा सरकार नै चर्चको बजारीकरणमा लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण ! « GDP Nepal
डा. लोहनी भन्छन्– बुद्ध भूमिमा सरकार नै चर्चको बजारीकरणमा लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण !
Published On :2December, 2018 6:15 pm
काठमाडौं, १६ मंसिर । एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले काठमाडौंमा भएको ‘एशिया प्यासिफिक समिट–२०१८’ को कार्डमा नेपाल सरकारको लोगो रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले यो कार्यक्रमको तामझामको लागि कमसेकम दुई करोड खर्च सरकारले गरेको आरोपसमेत लगाए ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका लोहनीले भने– डेलिगेट्स ल्याउने खर्च आयोजक संस्थाले नै गरेको छ । तर, यसको तामझामको लागि नेपाल सरकारले ठूलो खर्च गरेको छ ।’
सरकारले यो विवादित संस्थासँग सहकार्य गर्नुको कारण के हो भन्दै उनले प्रश्नसमेत तेर्साए ।
डा. लोहनीले भने नेपालको लागि यो भेलाको उद्देश्य युनिफिकेसन चर्चको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्ने र उक्त चर्चका इसाइ पादरीबाट नेपालका ठूलाबडाका दम्पतिसहित आशीर्वाद लिने काममा सिमित रहेको देखिएको बताए । “युनिफिकेसन चर्चको बजारीकरणमा नेपाल सरकारले दुई करोड़ खर्च गरी हिस्सेदार बनेर हिन्दु र वुद्ध भूमि नेपालको सांस्कृतिक जग बलियो हुन्छ भन्नु अर्थहीन हो,” उनले भने ।
उनले भने– अब उनीहरुपनि त्यही संस्थाको परिवार भए । प्रकारान्तरले यो सम्मेलनले ईशाईलाई बढावा दिएको छ ।’ आफू धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको सुनाउँदै उनले यो सम्मेलन नेपालको संविधानविपरित पनि रहेको जिकिर गरे । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजीले नेपालको संविधानलाई चूनौति दिने काम गर्नुभयो । “अमेरिकालगायत अन्य देशमा यो संस्थाले कम्युनिष्टहरुको विरुद्धमा पैसा लगानी गर्दै आएको छ । तर, त्यही संस्थाको पक्षमा यो कम्युनिष्ट सरकार किन उभियो ? मलाई आश्चर्य लागेको छ,” उनले भने ।
नेपाल सरकारले विवादस्पद संस्थाको बजारीकरण र बढावा दिन, र उनीहरुको हातबाट आर्शिवाद लिने काम किन गर्यो भन्दै लोहनीले पटक–पटक प्रश्न समेत तेर्साए । उनले अझै प्रश्न गरे– कतै नदेखिनेगरि उनीहरुबीच लेनदेन त भएको छैन ? कतै नदेखिनेगरि नेपालको राष्ट्रियता, गरिमा र अस्मिता बेचबिखन त भएन ?, त्यही भएर हाम्रो पार्टीले सम्मेलनमा भाग नलिएको हो । हामी सरकारले आयोजना गरेको भोजमा पनि सहभागी भएनौं ।’
वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र चिन्तन नदेखिएको उनको गम्भीर आरोप छ । उनले भने,‘सरकार लहडमा चलेको छ । मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन भएको छ । जनताले दिएको विश्वास दुरुपयोग भएको छ ।’ सरकारले यो ९ महिनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको पनि उनको अर्को आरोप छ ।
उनले भने– प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नुभएन वा उहाँले नियन्त्रण नै गर्न चाहनुभएन् । सक्नुभएन भनौं भने दुई तिहाईको बहुमत छ । तर, भ्रष्टाचार व्यापक बढेको छ।’ साँढे ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरण कहाँ पुग्यो भनेर उनले प्रश्नसमेत तेर्साए । उनले भने,‘यही तरिका हो भने अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने स्थिति छैन् ।’
सरकारको काममा पनि व्यापक हा«स आएको उनको भनाई छ ।